OTU ESI CHỌPỤTA NLELE GỊ MTS SITE NA EKWENTỊ MA Ọ BỤ KỌMPUTA: IWU, SMS NA ỤZỌ NDỊ ỌZỌ, NTỤZIAKA SITE NA NKWỤSỊ NA NTANETI NA VIDIYO, ATỤMATỤ MAKA MPAGHARA RUSSIA NA MBA CIS - NETWORK NA INTANETI - 2019
Otu esi achọta ihe ndọtị gị na MTS ejikọrọ na ụzọ dị iche iche
Usoro na ugboro ole ịkwụ ụgwọ, ọrụ dịnụ, usoro nke ọrụ na ngbanwe na ọnụego ọzọ dabere na tarifụ eji. Ịmara nke a dị ezigbo mkpa, ma e wezụga, ụzọ maka ịchọta ọrụ ndị dị ugbu a bụ n'efu, gụnyere maka ndị debanyere aha MTS.
Otu esi achọpụta ekwentị gị na ịntanetị site n'aka MTS
Nye iwu kisa
Video: esi chọpụta tarifu nke nọmba MTS
Ọ bụrụ na eji kaadị SIM na modem
Ọrụ nkwado aka
Onye nlekota aka
Site na akaụntụ onwe onye
Site na ngwa mkpanaka
Enwere oge mgbe ị na-enweghị ike ịchọta ego
Ndị ọrụ nke kaadị SIM site na ụlọ ọrụ "MTS" na-enweta ọtụtụ ụzọ iji chọpụta ozi gbasara ọrụ ejikọrọ na nhọrọ. Ha niile agaghị emetụta ọnụ ọgụgụ gị. Ma ụfọdụ ụzọ ga-achọ ịnweta ịntanetị.
Ịga ịpị nọmba, ịkọ iwu * 111 * 59 # na ịpị bọtịnụ oku, ị ga-agba ọsọ iwu USSD. Ekwentị gị ga-enweta ọkwa ma ọ bụ ozi, nke nwere aha na nkọwa dị mkpirikpi nke tarifu.
Emezu iwu * 111 * 59 # ịchọta ọnụahịa gị
A pụrụ iji usoro a mee ihe na mpaghara nile nke Russia na ọbụna mgbe ọ na-agagharị.
Ọ bụrụ na kaadị SIM dị na modem ejikọrọ na kọmpụta, ị nwere ike ikpebi tarifu site na ngwa pụrụ iche "Njikọ Njikọ", nke a na-edozi na akpaghị aka mgbe mbụ ị na-eji modem. Mgbe ị malitere ngwa ahụ, gaa na taabụ "USSD" - "USSD-service" ma mezue nchikota
Gaa ọrụ USSD wee mebie iwu * 111 * 59 #
* 111 * 59 #. Ị ga-enweta nzaghachi n'ụdị ozi maọbụ ngosi.
Mgbe ị kpọrọ nọmba * 111 #, ị ga-anụ olu nke ọrụ MTS na-aza ajụjụ. Ọ ga-amalite na-edepụta ihe niile menu, ị nwere mmasị na ngalaba nke 3 - "Ụgwọ", na mgbe nkeji nke 1 - "Nweta ụtụ gị". Gbanwuo menu site na iji nọmba dị na keyboard. Ozi ga-abịa n'ụdị ọkwa ma ọ bụ ozi.
Ụdị nke usoro mbụ: akpọ nọmba 111, ị ga-anụ olu nke igweza aza. Pịa 4 na keyboard iji gee ntị gbasara ozi gbasara tarifu gị.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke "MTS" ma banye na ya. Gaa na ozi gbasara ọnụọgụ nọmba na akaụntụ. Na peeji nke mbụ ị ga-enweta ozi dị nkenke gbasara tarifu ejikọtara. Site na ịpị aha ya, ị nwere ike ịlele ozi zuru ezu banyere ọnụahịa nke Intanet, oku, ozi, ịgagharị, wdg.
Na ozi banyere nọmba ahụ bụ aha ụgbọ ala.
Ụlọ ọrụ "MTS" nwere ngwa ngwa "My MTS" maka ngwaọrụ gam akporo na ngwaọrụ iOS, nke enwere ike ibudata n'efu na Play Market na Ụlọ Ahịa. Gbaa ngwa ahụ, gaa na akaụntụ nkeonwe gị, mepee menu ma gaa na mpaghara "Tariffs". N'ebe a, ị nwere ike ịlele ozi gbasara tarifu ejiri, tinyere ọnụahịa ndị ọzọ dịnụ.
Na ngwa "My MTS" anyị na-ahụ taabụ "Tariffs"
Nke a bụ usoro kachasị mfe, ebe ọ bụ na a ga-atụle ọrụ onye ọrụ karịa 10 nkeji. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe kpatara na ọ gaghị ekwe omume iji usoro ndị ọzọ, kpọọ ọnụ ọgụgụ 8 (800) 250-08-90 ma ọ bụ 0890. Nọmba mbụ bụ maka oku oku na oku site na kaadị SIM nke onye ọrụ ọzọ, nke abụọ bụ nọmba dị mkpirikpi maka oku sitere na nọmba ekwentị. Mts.
Ọ bụrụ na ị na-agagharị, jiri nọmba +7 (495) 766-01-66 kpọtụrụ nkwado.
Enweghị ọnọdụ mgbe ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta tarifu. Ọ bụrụ na ị nwere ịntanetị, mgbe ahụ, usoro niile akọwapụtara n'elu dị gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị ebe ahụ, ụzọ niile dị, ma e wezụga maka "Site na akaụntụ onwe gị" na "Site ngwa ngwa." Maka ndị na-agagharị, ụzọ niile dị n'elu dịnụ.
Lelee ma ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa ole na ole ihe nhọrọ, ọrụ, na ọrụ dị ugbu a. Mgbe ụfọdụ, enwere ọnọdụ mgbe nkwekọrịta ochie ahụ kwụsịrị ịkwado ụlọ ọrụ ahụ, ma ị na-ejikọ aka na nke ọhụrụ, ikekwe na-abaghị uru.